I-China Neodymium Magnet Imeko kunye neProspect
Icandelo lemveliso yemagnethi esisigxina lase China lidlala indima ebalulekileyo emhlabeni. Akukho kuphela amashishini abandakanyeka kwimveliso nakwisicelo, kodwa nomsebenzi wophando ubukwisonyuka. Izinto ezisisigxina zomazibuthe zahlulwe ubukhulu becala kumazibuthe omhlaba, umazibuthe osisinyithi osisigxina, umazibuthe odibeneyo osisigxina kunye nomazibuthe osisigxina weferrite. Phakathi kwayo, umazibuthe onqabileyo womhlaba wemagneti yimveliso esetyenziswa ngokubanzi kwaye ikhula ngokukhawuleza kwimagnethi.
1. I-China isebenzisa umhlaba onqabileyo weNeodymium osisigxina wemathiriyeli.
I-China ngoyena mvelisi mkhulu wezimbiwa zomhlaba ezinqabileyo, ezibala i-62.9% yeemveliso zezimbiwa ezinqabileyo zizonke ngo-2019, zilandelwa yi-United States ne-Australia, zibala i-12.4% ne-10% ngokwahlukeneyo. Ngombulelo koovimba bomhlaba obunqabileyo, i-China iye yaba sisiseko esikhulu semveliso kunye nesiseko sokuthumela ngaphandle iimagnethi zomhlaba ezinqabileyo. Ngokwezibalo zeChina Rare Earth Industry Association, ngo-2018, iChina yavelisa iitoni ezingama-138000 zeemagnethi zeNeodymium, zibala iipesenti ezingama-87 zeziphumo zehlabathi, phantse izihlandlo ezili-10 zaseJapan, eyesibini ngobukhulu emhlabeni.
2. Umhlaba onqabileyo iimagnethi zeNeodymium zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi.
Ukusuka kwimbonakalo yamasimi esicelo, umazibuthe osezantsi we-Neodymium umatshini osetyenziswa ikakhulu kwi-adsorption yamagnetic, ukwahlukana ngemagnethi, ibhayisekile yombane, imithwalo yemithwalo, umnyango, iithoyi namanye amasimi, ngelixa ukusebenza komazibuthe omninzi we-Neodymium ubukhulu becala kusetyenziswa kwiintlobo ezahlukeneyo zombane iimoto, kubandakanya ukonga umbane iimoto, iimoto, ukuveliswa kwamandla omoya, izixhobo zomsindo-ezibonakalayo, ikheshi, njl.
3. Izinto ezinqabileyo zomhlaba wase China iNeodymium ziyanda ngokuthe chu.
Ukusukela ngo-2000, i-China iye yaba ngumvelisi omkhulu wehlabathi weemagnethi zeNeodymium ezinqabileyo. Nophuhliso izicelo ezantsi, imveliso NdFeB izinto umazibuthe e China sele ikhula ngokukhawuleza. Ngokwedatha ye-China Rare Earth Industry Association ngo-2019, imveliso ye-sintered Neodymium blanks yayizi-170000 tons, accounting for 94.3% of the total output of Neodymium magnetic materials in that year, bonded NdFeB accounted for 4.4%, and other total output zinikwe i-1.3% kuphela.
4. Imveliso yemagneti yaseTeodymium yase China kulindeleke ukuba iqhubeke nokunyuka.
Ukusetyenziswa komhlaba okukuhla kwe-NdFeB kuhanjiswe kumzi mveliso weemoto, ibhasi kunye nomzila kaloliwe, irobhothi ekrelekrele, ukuveliswa kwamandla omoya kunye nezithuthi zamandla amatsha. Izinga lokukhula kwamashishini angentla kule minyaka mihlanu izayo iya kudlula kwi-10%, eya kuthi ikhokelele ekwandeni kwemveliso yeNeodymium e-China. Kuqikelelwa ukuba ukukhutshwa kwemagneti yeNeodymium e-China kuyakugcina izinga lokukhula kwe-6% kule minyaka mihlanu izayo, kwaye iya kugqitha iitoni ezingama-260000 ngowama-2025.
5. Imfuno yokusebenza okuphezulu kwezinto ezinqabileyo zomhlaba kulindeleke ukuba zikhule.
Ukusebenza okuphezulu iimagnethi zomhlaba ezinqabileyo zisetyenziswa kakhulu kwimimandla yezoqoqosho ephantsi, njengokugcina umbane kunye nomzi mveliso wokukhusela indalo. Njengamazwe kwihlabathi liphela atyala imali eninzi kwikhabhoni esezantsi, ekonga umbane nakwimveliso yokukhuselwa kwendalo esingqongileyo kunye nokukhuthaza iimveliso eziluhlaza, amazwe atyala imali kakhulu kwikhabhoni esezantsi, okonga umbane kunye nomzi mveliso wokukhusela indalo kunye nokukhuthaza iimveliso eziluhlaza Ngophuhliso olukhawulezileyo amashishini asahlumayo anje ngezithuthi zamandla amatsha, iirobhothi ezenza amandla omoya kunye nokuveliswa kwezinto ngobuchule, imfuno yokusebenza ngamandla koomazibuthe abasisigxina kulindeleke ukuba ikhule. Ngokukhula ngokukhawuleza kwamashishini avelayo, imfuno yokusebenza okuphezulu kwezinto ezinqabileyo zomhlaba kulindeleke ukuba zikhule.
Ixesha Post: May-06-2021